Nin mayd ah oo laga helay koonfurta magaalada Garoowe – Radio Daljir
Febraayo 27, 2013 3:24 b 0
Garoowe,Feb 27,Ninkaan maydka ah ayaa waxaa laga helay ?meel 5 Km dhinaca ?koonfurta ka xigta magaalada Garoowe ee caasimada Puntland,waxaana uu ka lushey geeed isagoo surka uga xirnaa xarig.?
Ciidamada ammaanka Puntland ayaa wada baaritaan la xariira ninkaan maydka ah oo aan la cadayn Karin inuu is diley iyo in la diley ?waxaana qoorta uga xirnaa xarin nooca looyaqaan cayngariga, masuuliyiin ka mid ah maamulka Puntland,saraakiisha ammaanka iyo bahda caafimaadka ayaa goobta gaarey mana jiraan illo xog ogaal ah oo laga xaqiijin karo inuu ninkaani isagu is diley iyo in dilkiisa cidkale ka danbeysey.
Taliyaha qaybta gobolka Nugaal Faarax Warsame C/raxmaan oo shir jaraa?id ku qabtay goobta maydka laga helay ayaa sheegay inay wadaan baaritaan lagu xaqiijinayo sida arintaani u dhacday.
Maydka ninkaan ayaa waxaa uu goobta yaaley in ka badan 24 saac taas oo kaliftay in la garan waayo wajiga ninkaan maydka ah ee laga helay meel ka baxsan magaalada.
Sanadkii 2010 ayaa sidaas si la mid ah waxaa duleedka magaalada Garoowe laga helay nin ?maydka ah oo ka laa laada ?geed waxaana dhacdooyinkaani noqonayaan dhacdooyin naxdin leh oo ku cususub wadanka
Dhagaysi Cod, taliyaha qaybta gobolka Nugaal oo ka hadlay?